တရုတ်စူပါလိဂ်မှာ ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ အစ္စရေးတိုက်စစ်မှူး | FOX Sports Myanmar
အာရှဘောလုံး | ဩဂုတျ 14, 2019
တရုတ်စူပါလိဂ်မှာ ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ အစ္စရေးတိုက်စစ်မှူး
ပီးခဲ့တဲ့ နှစ်ပိုင်းတွေမှာ နာမည်ကျော် ကစားသမားတွေကို ငွေကြေးအမြောက်အများပေးပြီး ခေါ်ယူခဲ့တဲ့ တရုတ်စူပါလိဂ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံး ကစားသမားဆုကို ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့ပါပြီ။ အဆိုပါဆုရှင်ကတော့ အားလုံးတွေး ထင်ခဲ့တဲ့အတိုင်း အော်စကာ ဖြစ်နေမလား ၊ ဒမ်ဘာဘ ပဲ ရရှိမှာလား ဒါမှမဟုတ် ဟော့ကပဲ အဆိုပါဆုရှင် ဖြစ်လာမလားဆိုတာ အားလုံး စိတ်ဝင်စားခဲ့ ကြပါတယ်။တကယ်တော့ နာမည်ကျော် ကစားသမားအားလုံးကို နောက်ကောက်ကျစေခဲ့ပြီး တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးဆုကို ရယူခဲ့သူတစ်ဦးပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ သူကတော့ အီရန် ဇဟာဗီပါပဲ။
ဇဟာဗီဟာ အစ္စရေးလက်ရွေးစင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး တစ်ရာသီတွင်း ၂၇ ဂိုးထိသွင်းယူ နိုင်ခဲ့တဲ့ ကွမ်ကျိုးအာအန်အက်ဖ် အသင်း ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ကွမ်ကျိုးအသင်း လည်း အမှတ်ပေးဇယားရဲ့ အဆင့် ၅ နေရာမှာ ရပ်တည်အောင် အဓိကစွမ်းဆောင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
Guangzhou R&F star Eran Zahavi has named as the most valuable player of the 2017 #ChineseSuperLeague?? season. Israeli striker who scored 27 goals, also awarded the Golden Boot. pic.twitter.com/8IBs3nKKeH
— Chinese Super League (@ChineseFooty) November 13, 2017
ကျွန်တော်တို့ အားလုံးနဲ့ ရင်းနှီးနေကျ ကစားသမားတစ်ဦးမဟုတ်တဲ့ ဇဟာဗီရဲ့ အကြောင်းကို Fox Sport Asia ကနေမိတ်ဆက် ဖော်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံအသင်းတွက်လည်း လက်ရှိအချိန်ထိ သွင်းဂိုး ၃၀ သွင်းယူပေးထားနိုင်ခဲ့တဲ့ ဇဟာဗီဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ အသက် ၃၀ အရွယ်ရှိနေပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ မက်စီဒိုးနီးယား အသင်းကို ၁ ဂိုး ဂိုးမရှိနဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်အပြီးမှာတော့ နိုင်ငံလက်ရွေးစင် ကစားသမားဘ၀ကို အနားယူကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
အစ္စရေးပွဲမှာ တွေ့ရတဲ့ ဇဟာဗီ
တရုတ်စူပါလိဂ်ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့ ဇဟာဗီဟာ ကလပ်အသင်းတွက် ပွဲပေါင်း ၅၃ ပွဲ ပွဲထွက်ကစားခဲ့ပြီး သွင်းဂိုး ၄၈ ဂိုး သွင်းယူခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ အသင်း အနေနဲ့လည်း အသင်းရဲ့ ဂိုးသွင်းစက် ဇဟာဗီကို စာချုပ်သစ်တစ်ရပ် ထပ်မံချုပ်ဆို ခဲ့ပြီးတစ်နှစ်လစာ ၇ သန်းခန့်ပေးချေထားပါတယ်။ တရုတ်စူပါလိဂ်မပြောင်းရွှေ့ခင် ဇဟာဗီဟာ ပြည်တွင်းကလပ်အသင်းနှစ်သင်းဖြစ်တဲ့ ဟာပိုးလ် တဲလ်အဗီ အသင်းနဲ့ မက်ကာဘီ တဲလ်အဗီ အသင်းတွေမှာသာ ကစားသမားဘ၀ ကျင်လည် ခဲ့ပါတယ်။၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ စီးရီးအေကလပ် ပါလာမိုအသင်းထံပြောင်းရွှေ့ ကစားခဲ့ပေမယ့် ၂ နှစ်အတွင်း ပွဲပေါင်း ၂၃ ပွဲသာ ကစားခဲ့ရတဲ့အတွက် ပြည်တော် ပြန်ခရီး စတင်ခဲ့ရပေမယ့် တရုတ်စူပါလိဂ်မှာတော့ ငွေကြေးအင်အား တောင့်တင်းတဲ့ အသင်းများရဲ့ နာမည်ကျော်ကစားသမားများကို ကျော်ဖြတ်ပြီး တစ်နှစ်တာ အကောင်းဆုံး ကစားသမားဆု ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ ဇဟာဗီရဲ့ အနာဂါတ်ကတော့ ပိုမိုစိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းနေခဲ့ပါပြီ။
ပီးခဲ့တဲိံ့စ်ြပိုင်းတေမြာ နာမည်ကေဵာ် ကစားသမားတေကြို ငြေေုကးအေူမာက်အမဵားပေး္ဘပီး ခေၞယူခဲ့တဲ့ တရုတ်စူပၝလိဂ်္ဘပိင်ြပြဲရဲႚ တစ်ိံစ်ြတာအကောင်းဆုံး ကစားသမားဆုကို ထုတ်ူပန်ေုကူငာခဲ့ပၝ္ဘပီ။ အဆိုပၝဆုရင်ြကတော့ အားလုံးတြေး ထင်ခဲ့တဲ့အတိုင်း အော်စကာူဖစ်နေမလား ၊ ဒမ်ဘာဘ ပဲ ရရြိမြာလား ဒၝမမြဟုတ် ဟော့ကပဲ အဆိုပၝဆုရငြ်ူဖစ်လာမလားဆိုတာ အားလုံး စိတ်ဝင်စားခဲု့ကပၝတယ်။တကယ်တော့ နာမည်ကေဵာ် ကစားသမားအားလုံးကို နောက်ကောက်ကဵစေခဲ့္ဘပီး တစ်ိံစ်ြတာအကောင်းဆုံးဆုကို ရယူခဲ့သူတစ်ဦးပေၞထက်ြခဲ့ပၝတယ်။ သူကတော့ အီရန် ဇဟာဗီပၝပဲ။
ဇဟာဗီဟာ အင်္စရေးလက်ရြေးစင်တစ်ဦူးဖစ်္ဘပီး တစ်ရာသီတငြ်း ၂၇ ဂိုးထိသငြ်းယိူိုံင်ခဲ့တဲ့ ကမ်ြကဵြိးအာအန်အက်ဖ် အသင်း ကစားသမားတစ်ဦူးဖစ်္ဘပီး ကမ်ြကဵြိးအသင်း လည်း အမတ်ြပေးဇယားရဲႚ အဆင့် ၅ နေရာမြာ ရပ်တည်အောင် အဓိကစမြ်းဆောင်ခဲ့သူဖစ်ပၝတယ်။
ကဵန်ြတော်တိုႛ အားလုံးနဲႛ ရင်ြးီံးနေကဵ ကစားသမားတစ်ဦးမဟုတ်တဲ့ ဇဟာဗီရဲႚ အေုကာင်းကို Fox Sport Asia ကနေမိတ်ဆက် ဖော်ူပပေးခဲ့ပၝတယ်။ိုံင်ငံအသင်းတက်ြလည်း လက်ရြိအခဵိန်ထိ သငြ်းဂိုး ၃၀ သငြ်းယူပေးထာိးိုံင်ခဲ့တဲ့ ဇဟာဗီဟာ လက်ရြိအခဵိန်မြာ အသက် ၃၀ အရယ်ြရြိန္ဘေပီး္ဘပီးခဲ့တဲ့ မက်စီဒိုးနီးယား အသင်းကို ၁ ဂိုး ဂိုးမရြိနဲႛ အိုံင်ရရြိခဲ့တဲ့ ပြဲစဉ်အ္ဘပီးမြာတောိုံ့င်ငံလက်ရြေးစင် ကစားသမားဘဝကို အနားယူေုကာင်း ထုတ်ူပန်ေုကူငာခဲ့သူဖစ်ပၝတယ်။
တရုတ်စူပၝလိဂ်ကို ၂၀၁၆ ခိုံစ်ြမြေူပာင်းရြေႚခဲ့တဲ့ ဇဟာဗီဟာ ကလပ်အသင်းတကြ် ပြဲပေၝင်း ၅၃ ပြဲ ပြဲထက်ြကစားခဲ့္ဘပီး သငြ်းဂိုး ၄၈ ဂိုး သငြ်းယူခဲ့သူဖစ်ပၝတယ်။ အသင်း အနေနဲႛလည်း အသင်းရဲႚ ဂိုးသငြ်းစက် ဇဟာဗီကို စာခဵပ်ြသစ်တစ်ရပ် ထပ်မံခဵပ်ြဆို ခဲ့္ဘပီးတစ်ိံစ်ြလစာ ၇ သန်းခန်ႛပေးခေဵထားပၝတယ်။ တရုတ်စူပၝလိဂ်မေူပာင်းရြေႚခင် ဇဟာဗီဟာူပည်တငြ်းကလပ်အသင်ိးံစ်ြသင်ူးဖစ်တဲ့ ဟာပိုးလ် တဲလ်အဗီ အသင်းနဲႛ မက်ကာဘီ တဲလ်အဗီ အသင်းတေမြာသာ ကစားသမားဘဝ ကဵင်လည် ခဲ့ပၝတယ်။၂၀၁၁ ခိုံစ်ြမြာ စီးရီးအေကလပ် ပၝလာမိုအသင်းထံေူပာင်းရြေႚ ကစားခဲ့ပေမယ့် ၂ိံစ်ြအတငြ်း ပြဲပေၝင်း ၂၃ ပြဲသာ ကစားခဲ့ရတဲ့အတကြ်ူပည်တော်ူပန်ခရီး စတင်ခဲ့ရပေမယ့် တရုတ်စူပၝလိဂ်မြာတော့ ငြေေုကးအင်အား တောင့်တင်းတဲ့ အသင်းမဵားရဲႚ နာမည်ကေဵာ်ကစားသမားမဵားကို ကေဵာ်ူဖတ်္ဘပီး တစ်ိံစ်ြတာ အကောင်းဆုံး ကစားသမားဆု ရယိူိုံင်ခဲ့တဲ့ ဇဟာဗီရဲႚ အနာဂၝတ်ကတော့ ပိုမိုစိတ်ဝင်စားဖိုႛ ကောင်းနေခဲ့ပၝ္ဘပီ။
Home Football Asian Football တရုတ်စူပါလိဂ်မှာ ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ အစ္စရေးတိုက်စစ်မှူး